ယူကေတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အကြီးမားဆုံး ရထားသပိတ်က ကြီးမားသောနှောင့်ယှက်မှုဖြစ်စေ - Xinhua News Agency
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ Clapham Junction ဘူတာရုံအပြင်ဘက်ရှိ ရထားလမ်းများအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လန်ဒန်၊ ဇွန် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သမဂ္ဂများနှင့် ရထားလမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအကြား နောက်ဆုံးမအောင်မြင်ခဲ့သော ဆွေးနွေးပွဲများ ဇွန် ၂၁ ရက်က ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနောက် ယူကေ ရထား၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (RMT) က နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အကြီးဆုံးရထားသပိတ်ကို ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ရှေ့ဆက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်နှင့် ဝေးလ် ရှိ ရထားဝန်ဆောင်မှုများကို ကြီးမားစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၂၁ ရက် ညသန်းခေါင်ယံတွင် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးနောက် ခရီးသည်တင်ရထား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ အလုပ်သမားများသပိတ်မှောက်မှုကို ယခုသီတင်းပတ် ကြာသပတေးနေ့ (ဇွန် ၂၃ ရက်) နှင့် စနေနေ့ (ဇွန် ၂၅ ရက်) တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ခရီးသည် သန်းပေါင်းများစွာအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဝါတာလူးဘူတာရုံအတွင်းဘက် မြင်ကွင်းအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ Clapham Junction ဘူတာရုံရှိ ရထားလမ်းများနှင့် ပလက်ဖောင်းများအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဝါတာလူးဘူတာရုံအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဝါတာလူးဘူတာရုံအတွင်းဘက်တွင် သင်္ကေတတစ်ခုအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဝါတာလူးဘူတာရုံအတွင်းဘက်၌ လမ်းလျှောက်နေသူများအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ Clapham Junction ဘူတာရုံရှိ သပိတ်မှောက်ကြောင်းကြော်ငြာချက်အား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဝါတာလူးဘူတာရုံမှ ထွက်ခွာရန်အသင့်ဖြစ်နေသော ရထားတစ်စင်းအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ ဝါတာလူးဘူတာရုံတွင် လမ်းလျှောက်နေသော အလုပ်သမားများအား ဇွန် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုတွင် အစောင့်များ၊ အစားအသောက်တာဝန်ယူသောဝန်ထမ်းများ၊ ရထားအချက်ပြဝန်ထမ်းများနှင့် ရထားလမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်သမားများ အပါအဝင် RMT သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၄၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
UK’s biggest rail strike in 30 years causes major disruption
LONDON, June 22 (Xinhua) — After last-ditch talks between unions and rail operators broke down here on Monday, the United Kingdom’s (UK) National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) gave the go-ahead on Tuesday to the country’s biggest rail strikes in 30 years that are expected to cause massive disruptions to rail services in England, Scotland and Wales.
Photo 1 : Photo taken on June 21, 2022 showsageneral view of the tracks outside Clapham Junction Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo2: Photo taken on June 21, 2022 showsageneral view inside Waterloo Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo3: Photo taken on June 21, 2022 showsageneral view of the tracks and platforms at Clapham Junction Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo 4: Photo taken on June 21, 2022 showsageneral view of Waterloo Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo5: Photo taken on June 21, 2022 showsasign inside Waterloo Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo6: People talk inside Waterloo Station in London, Britain, on June 21, 2022. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo7: Photo taken on June 21, 2022 showsageneral view of the tracks and platforms at Clapham Junction Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo 8 : Photo taken on June 21, 2022 showsanotice of strikes at Clapham Junction Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo9: A train gets ready to leave Waterloo Station in London, Britain, on June 21, 2022. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)
Photo 10 : Photo taken on June 21, 2022 shows workers walking in Waterloo Station in London, Britain. (Photo by Tim Ireland/Xinhua)■